Salohy Randriafanomezantsoa · Aogositra 2020 · Global Voices teny Malagasy
Salohy Randriafanomezantsoa · Aogositra, 2020
Nanomboka nandika tamin'ny 28 Aogositra 2016 · 275 Lahatsoratra
Lahatsoratra farany an'i Salohy Randriafanomezantsoa tamin'ny Aogositra, 2020
Spiderman manao sarontava sady mamalifaly ny ambanivohitr'i Melbourne anaty fihibohana
Oseania21 Aogositra 2020
"Misaotra an'ilay lehilahy manao hazakazaka manodidina an'i St Kilda miaraka amin'ny akanjo SpiderMan. Nampifalifaly ny tontolo andron'ny zanako efa intelo izao ianao."
Belarosia anaty fisafotofotoana
Mediam-bahoaka16 Aogositra 2020
Mandalo krizy politika, izay ilay mety tena goavana indrindra hatramin'ny nahazoany fahaleovantena i Belarosia. Ity firenena Eoropeana atsinanana ity izay misy mponina manodidina ny 10 tapitrisa dia nentin'ny Filoha Alyaksandr Lukashenka nanomboka tamin'ny taona 1994. Tamingana mahery ity mpitantana toeram-piompiana iombonana teo aloha ity. Nandritra ny 20 taona mahery, nampandamoka...
Amin'ny maha-Salvadoreana ahy, marika fiainana azo antoka i Etazonia ho ahy saingy rava izany ankehitriny
El Salvador15 Aogositra 2020
Mampisalasala sy mahavery fanantenana ho an'ireo mpifindra monina toa ahy ny fanavaozana tsy misy fitsaharana ny rafitry ny fifindramonina any Etazonia eo ambany fitantanan'i Trump.
Mpianatra mpikatroka miisa efatra nosamborina tany Hong Kong noho ny ‘fandrisihana fisintahana’ tao amin'ny tambajotra sosialy
Azia Atsinanana11 Aogositra 2020
Nisambotra tanora miisa efatra izay 16 ka hatramin'ny 21 taona ny sampan-draharaha vaovaon'ny Polisim-pirenena any Hong Kong noho ny fiahiahiana azy ireo ho nanao fandrisihana fisitahana tao amin'ny lahatsoratrany tao amin'ny tambajotra sosialy.
Shina: famonoan-tenan'ny mpianatra sangany iray hafa – ny tantaran'i Yang Yuanyuan
Azia Atsinanana08 Aogositra 2020
Na izany aza, tsy azo ovana ny natioran'ny olombelona. Misy fetrany foana ny fifehezan-tena ary ho montsana tanteraka raha toa ka henjana loatra.
Fantaro i Veer Keram, mpikatroky ny fiteny Gondi
Media-sôsialy06 Aogositra 2020
Fantaro i Veer Keram, ilay hitantana ny kaonty Twitter @AsiaLangsOnline ny 5-11 Aogositra 2020. Hizara ny asany miaraka amin'ny fiteny Gondi izy izay ampiasaina any India.
Afrika Mainty02 Aogositra 2020
Fisehoan-javatra tsy fahita firy araka ny famaritan'ny jeology sasany, nitrangana horohorontany miisa 30 ny distrika avaratr'i Malawi ao Karonga tao anatin'ny telo herinandro ka farafahakeliny olona miisa 5 no maty, ary maherin'ny 200 no naratra ary olona maherin'ny 3,000 no tsy manan-kialofana. Mailaka ireo bilaogera nizara ny fanehoan-kevtr'izy ireo.